2. Buy One, Get One Free on All Pizzas Daily - Parami Pizza
3. Weekday discount 50% - Miyako Clinic
4. ၂သိန်းနှင့်အထက်ဝယ်ယူပြီး Century Wallet တစ်အိတ် လက်ဆောင်ရယူလိုက်ပါ - Century Men Accessories
1. တစ်ပတ်စာ သင့်ကံကြမ္မာ
2. ၂၀၁၇ - ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများကို အွန်လိုင်းမှ ကြည့်ရှုနိုင်မည်
3. ဂျာမနီတစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးဆုကို အနားယူသွားခဲ့ပြီဖြစ်သော ဖီးလစ်လမ်း ရရှိ
1. ချိန်းတွေ့နေကြပြီဆိုတဲ့ကောလဟာလတွေကိုအတည်ပြုလိုက်တဲ့ Uee နဲ့ Kangnam
2. တတိယအပတ်အတွက် TV chart မှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ ‘Fight For My Way’ 3. အယ်ဘ်ဘမ်အသစ်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုကုစားပေးပြီး သင့်မြတ်အောင်လုပ်ပေးချင်တဲ့ EXO
1. စီးကရတ် မီးခိုးထဲက ထွက်လာတဲ့ ကြောင် - Chapter1
2. ကျည်ဆံ - Chapter 1
3. မုန်လာချဉ်ပုလင်းကလေး - အစ/အဆုံး
2. မိမိထံခေါ်ဆိုသောဖုန်း တည်နေရာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
သတင်းများ ကိုရီးယား ဖျော်ဖြေမှုသတင်းများ ၀တ္ထုများ လိုတရ ၀န်ဆောင်မှုများ
ဓမ္မတရားတော်များ ကံစမ်းမဲ စုဒိုကု ယနေ့ကံကြမ္မာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ကူပွန် မေးကြမယ် ဖြေကြမယ် MPT ၀န်ဆောင်မှုများ
စေတနာကမ်းလက်များ ခေါ်သူနားဆင်တေးသံစဉ် သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဖျော်ဖြေရေးများ MPT၏ အခမဲ့ ထပ်ဆောင်း ၀န်ဆောင်မှုများ အင်တာနက်အစီအစဉ်များ Web Self-Care (Sim Registration) မိမိ၏ အကောင့် MPT Applications လိုတရ အကြောင်းရှာဖွေရန်
လိုတရ အကြောင်း ဆက်သွယ်ရန် စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ လိုတရ Facebook သို့ contents
ကျောက်စရစ် စုပ်ထုတ်မှု ပိတ်ထားသည့် အတွက် ဈေးကွက်အတွင်း ကျောက်စရစ်ဈေး မြင့်တက်
ရန်ကုန်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း ဈေးကွက်သို့ မြန်အောင်နှင့် အဖျောက်မြို့များမှ ကျောက်စရစ်များအဓိက ဝင်ရောက်လျက်ရှိပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ယင်းဒေသများ၌ ကျောက်စရစ် စုပ်ထုတ်မှုများကိုပိတ်ထားသည်အထိ စည်းကမ်းတင်းကျပ်မှုများ ရှိလာခဲ့ကာ ယခုဇူလိုင်လကုန်အထိ ဆက်လက်ပိတ်ပင်ထားဖွယ်ရှိ ကြောင်းသိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လနောက်ဆုံး အပတ်အထိ ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်း ကျောက်စရစ်တစ်ကျင်းလျှင် ကျပ် ၇ဝဝဝဝ သာရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါ တစ်ကျင်းလျှင် ကျပ် ၈ဝဝဝဝ အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ဈေးကွက်အတွင်း ကျောက်စရစ်ဝင်ရောက်မှုမှာ ဇူလိုင်လကုန်အထိ နည်းပါးနိုင်ခြေရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ကျောက်စရစ်တစ်ကျင်းလျှင် ကျပ်တစ်သိန်းကျော်အထိ ဆက်လက် မြင့်တက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း သုံးသပ်မှုများရှိသည်။
မိဘမေတ္တာအိမ်ဆောက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေးမှ မသီတာက ''ကျောက်စရစ်ကတော့ အဝင်နည်းတာကြောင့် ဈေးကတော့ သိသိသာသာတက်လာတယ်။ ကျောက်စရစ် စုပ်တဲ့ဒေသတွေမှာ ကျောက်စရစ် စုပ်ထုတ်တာကို အခုလကုန်အထိ ပိတ်ထားမယ်လို့သိရတယ်။ အဲဒါ ကြောင့် ဈေးကတော့အခုထက်ဆက် တက်လာနိုင်တယ်။ တစ်သိန်းကျော် လောက်အထိကို ရောက်လာနိုင်တယ်''ဟု ဇူလိုင် ၁၆ ရက်ကပြောသည်။
အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဈေးကွက်အတွင်း ကျောက်စရစ်တစ်မျိုးတည်းသာ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပြီး ကျန်ပစ္စည်းများမှာ ဈေးနှုန်းပြောင်း လဲမှုမရှိဘဲတည်ငြိမ်နေကာ လက်ရှိ ဈေးကွက်အတွင်း လက်အုတ် တစ်လုံးလျှင် ကျပ် ၉ဝ ရှိပြီး စက်အုတ် (ရှစ်ပေါက်)တစ်လုံးလျှင် ကျပ် ၁၁ဝ ရှိကာ သဲဈေးနှုန်းများမှာလည်း တစ် ကျင်းလျှင် ကျပ် ၈ဝဝဝ ဖြင့် ဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်နေကြောင်းသိရသည်။ ဘိလပ်မြေဈေးနှုန်းများမှာ ဆင်တံဆိပ်(ယိုးဒယား)တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၆၃ဝဝ၊ ဆင်တံဆိပ်(မြန်မာ)တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၅၅ဝဝ၊ ကြံ့နှစ်ကောင်တံဆိပ်(အနီ) တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၅၅ဝဝ၊ ကြံ့နှစ် ကောင်(အစိမ်း)တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၅၂ဝဝ နှင့် Alpha တံဆိပ်ဘိ လပ်မြေတစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၅၇ဝဝ အထိ ဈေးနှုန်းအသီးသီးရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်ငွေဝင်းနှင့်သားများ အိမ် ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမှ ကိုသန်းအောင်က ''ကျောက်စရစ် အဝင်နည်းတာကလည်း ကျောက်စရစ်စုပ်တဲ့ဘက်မှာ တင်းကျပ်လာလို့ ကျောက်စရစ်ဈေးက တက်လာတာပါ။ ကျောက်စရစ်ဈေးတက်ပေမယ့်ဝယ်တဲ့သူတွေကတော့ ဈေးတက်လည်း ဒီပစ္စည်းတွေက အိမ်ဆောက်တဲ့အခါ သုံးကိုသုံးရမယ့်အတွက် မဝယ်လို့မဖြစ်တာကြောင့် ဝယ်လိုအားကတော့ သူ့ဟာနဲ့သူရှိနေပါတယ်''ဟု ဇူလိုင် ၁၆ ရက်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။ ယခုအခါ မိုးတွင်းကာလသို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည့်အတွက် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဈေးကွက်အတွင်း အရောင်းအဝယ်များ အေး နေကြောင်း သိရသည်။
ထီ မှာယူထားပြီး ဝယ်ယူရန် ပျက်ကွက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များကို အမည်ပျက် စာရင်းသွင်း၍ အာမခံငွေများ နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းယူမည်
''ထီကိုယ်စားလှယ်တွေ အမှာအတိုင်းထုတ်ဝေထားတာပါ။ ထီကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ ရောင်းအားအခက်အခဲရှိလို့ အမှန်တကယ်မယူနိုင်ရင် သုံးလကြိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်မှာယူထားတဲ့ ပမာဏအတိုင်းမယူနိုင်လို့ အချိ
နေအိမ်မြေအောက် အတွင်းမှ တူးဖော်ရရှိသော ရှေးဟောင်းရွှေထည်များကို စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရထံ အပ်နှံ
အဆိုပါ လက်ဝတ်ရတနာများကို အိမ်ပိုင်ရှင် ဒေါ်နှင်းနှင်းမြ(ခ)မငယ်က ဇူလိုင် ၁၃ ရက်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အရာတော်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်၍တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖ
ရှယ်ယာလိမ်ရောင်းသည့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကို တရားစွဲဆိုရန် စီစဉ်
ရှယ်ယာလိမ်လည် ရောင်းချသည်ဟု တိုင်ကြားခံထား သည့် ရှယ်ယာကုမ္ပဏီနှစ်ခုကို တရားစွဲရန် ရှေ့နေချုပ်ရုံးသို့ တင် ပြထားပြီး ယင်းကုမ္ပဏီနှစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူများကို စောင့်ကြည့်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးထံ တင်ပြထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အမ်ပီတီ၏ 4G နည်းပညာကို ထောက်ပံ့နိုင်သည့် ဟန်းဆက် ဈေးကွက်တွင် ရှားပါး
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း (MPT)က မိတ်ဆက်ခဲ့ သည့် 4G ကွန်ရက် 4x4 MIMO (Multiple Input Multiple Output) နည်းပညာကိုထောက်ပံ့ပေး နိုင်သည့် ဟန်းဆက်သည် ဈေးကွက်အတွင်း အလွန်ရှားပါးနေကြောင်း ဟန်းဆက် ရောင်းချသူများက ပြောသည်။
တရုတ်ဈေးကွက်သို့ ပြောင်းဖူးစေ့ တရားမဝင် တင်ပို့မှုများကို ဖမ်းဆီးအရေးယူမည်
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရှောင် ကွင်းလမ်းများမှ တရားမဝင် ပြောင်းဖူးစေ့တင်ပို့နေမှုကို သက် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက ဖမ်း ဆီးမိပါက ယာဉ်နှင့်ကုန်ပစ္စည်း များသိမ်းဆည်းမည့်အပြင် လူကို ပါ အရေးယူမည်ဟု ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မုံရွာမြို့သို့ ကုန်စိမ်းသီးနှံ တင်ပို့ရာဒေသများရှိ စိုက်ခင်းများ ရေမြုပ်နေသဖြင့် ကုန်စိမ်းဈေးများ ခုန်တက်
''ဘူးသီး၊ ငရုတ်၊ တရုတ်နံနံ၊ ဖြူပင်၊ ဖြူထုပ်၊ ဆူးပုပ်ရွက်တွေ အကုန်ဈေးတက်တယ်။ မုန်လာထုပ်၊ မုန်လာပွင့်၊ ဂေါ်ရခါးသီးတွေက မန္တလေး၊ မေမြို့တို့ဘက်ကလာတော့ ဈေးမတက်ဘူး။ တောင်ကျွန်းထဲက ဈေးသည်တွေကသာ မြစ်ေ
ကျူးကျော်အိမ်များ ဖယ်ရှားထားသည့် လှည်းကူး အမြန်လမ်းဘေး ဧရိယာတွင် တိုက်ခန်း ၄ဝဝဝ လာမည့်လ စတင်ဆောက်မည်
''အခုက ခြံစည်းရိုးတွေခတ်၊ မြေတိုင်းတာတွေစလုပ် နေပြီ။ လူနေတိုက်ခန်းတွေဆောက်ဖို့က ရှေ့လမှစမယ်။ အခုကထပ်ပြီးမကျူးအောင် အရင်ဆုံးလုပ်နေရတဲ့အနေအထားပါ။ စီမံကိန်းမှာလူတွေတိုက်ခန်းတွေပြီးရင် အနားယူလို
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် ပိတ်သိမ်းခံရသည့် ကုမ္ပဏီများကို စိစစ်ခွင့်ပြုမည်ဟုဆို
တစ်ဆင့်ခံ ကုန်သွယ် ရေးဖြင့် သကြားတင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီ ၅၆ ခု၏ ပို့ကုန်၊ သွင်း ကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ပိတ် သိမ်းမှုကို ပြန်လည်စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြု ပေးမည်ဟု စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန် ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရန်နိုင်ထွန်းက ပြောသည်။
ဆန်စပါးကုန်သွယ်မှု မူဝါဒ ယခုနှစ်အတွင်း ပေါ်ထွက်ရန် အသင်းချုပ် ဆောင်ရွက်မည်
ပြည်ပတင်ပို့မှု၊ ပြည် တွင်း စားသုံးမှုတို့ကို ချိန်ဆနိုင် မည့် ဆန်စပါးကုန်သွယ်မှု မူဝါဒ ပေါ်ထွက်လာရေးကို ၂၀၁၇-၁၈ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက် မည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအ သင်းချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေး မှူးဦးရဲမင်းအောင်က ပြောသည်။
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများမှ ကုန်သွယ်မှု သုံးလကျော်အတွင်း မြင့်တက်
၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီမှ ဇူလိုင်ပထမသီတင်းပတ်အ ထိ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ၁၆ ခုတွင် စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှု ကန်ဒေါ်လာ နှစ်ဘီလီယံခန့်ရှိပြီး ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလတူထက် ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ကျော် ပိုမိုကုန် သွယ်နိုင်ခဲ့သည်။
x Lotaya Tutorial